Fitbit ọnọde ya Aria 2 WiFi smart ọnụ ọgụgụ, otu n'ime ndị kasị ezi na ahịa | Akụkọ akụrụngwa
Fitbit ọnọde ya Aria 2 Wifi smart n'ọtụtụ, otu n'ime ndị kasị ezi na ahịa
Ọ bụghị naanị na smartwatches ka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-atụle etu ha si eme egwuregwu kwa ụbọchị. Fitbit maara nke a yana ya na Fitbit Iconic smartwatch, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara ekweisi ikuku, nke na-akpaghị aka na Fitbit Iconic iji gee egwu anyị debere n'ime, mana gosipụtara Aria 2 Wifi smart n'ọtụtụ, a ọnụ ọgụgụ nke ị na mezue a Na nke mgbatị na-agba mbọ ngwaọrụ na egwuregwu ọ bụla hụrụ n'anya kwesịrị inwe.
Ọgbọ nke abụọ nke Fitbit, onye nlereanya mbụ ya ghọrọ akwụkwọ mgbe ọ bịara nkenke na ọ na-enye anyị, na-enye anyị ohere ọ bụghị naanị ijikwa ibu anyị, kamakwa nke ahụ bụ maka ịlele ogo ahụ anyị na oke abụba anyị na-agba ọkụ mgbe ọ bụla mgbatị ahụ ma ọ bụ mgbe anyị si na-agba ọsọ. Ngwaọrụ a jikọtara ekwentị anyị site na Wi-Fi ma gosi anyị ozi niile site na ngwa Fitbit Aria oge ọ bụla anyị guzo na nha, na-egosi anyị eserese na mbido ma ọ bụ ibelata nke anyị nwere na ụbọchị ndị na-adịbeghị anya, izu ma ọ bụ ọnwa. .
Fitbit Aira 2 na-akwado ndị ọrụ 8 dị iche iche, yabụ ọ bụrụ na anyị bụ nnukwu ezinụlọ nwere mmasị n’egwuregwu, ọ dịghị mkpa ka anyị zụta nke ọ bụla. Site na ngwa mkpanaka ahụ, anyị ga-ahụ ebumnuche dị iche iche iji kpalie onwe anyị iji nọgide na-enwe ma na-eme ka ọnụ ọgụgụ anyị nwee ekele maka onye na-azụ ọzụzụ, yana onye na-enye ọzụzụ nke anyị ga-agabiga na ndenye ọpụpụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ọtụtụ ihe ya.
Fitbit Aria 2 Wifi dakọtara na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ngwa ahụ inwe ike ịnweta site na otu ngwa niile data metụtara ahụike anyị n'otu ebe. Mbido nke ọgbọ nke abụọ nke Fitbit's smart scale na-akwado maka etiti Ọktọba ma ọ ga-adị na agba abụọ: oji na ọcha. Ọnụ ego dị na United States ga-abụ $ 129,95 gbakwunyere ụtụ isi. Ugbu a, anyị kwesịrị ịma mgbe ọ ga - adị na Europe yana ego ole ọ na - eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Fitbit ọnọde ya Aria 2 Wifi smart n'ọtụtụ, otu n'ime ndị kasị ezi na ahịa
A ga - ahụ ihe ngosi ọhụụ nke Samsung Gear na bọọdụ bọọdụ tupu awa ngosipụta ya na IFA 2017
Etu esi lelee ma budata katalọgụ IKEA 2018